10 goodhiyaha la yaab leh u Windows 10
Windows 10 Talooyin & Tricks
1 Hel Windows 10 aad Computer
1.1 Windows 10 oo lacag la'aan ah
1.2 Download iyo rakibi Windows 10
1.4 Guba Windows 10 ISO
2 Windows 10 Features & Talooyin
2.1 Windows 10 muuqaalada
2.2 Windows 10 Talooyin
3 Run Windows 10 on PC iyo kiniin
3.1 Windows 10 shuruudaha hardware u PC
3.2 Windows 10 looxa
4 Ilaha Windows 10
4.2 Windows 10 mawduucyada
4.3 Windows 10 mawduucyada for Windows 8
4.4 Windows 10 mawduucyada for Windows 7
4.5 Windows 10 isjiidka
4.6 Windows 10 goodhiyaha
5 Windows 10 muhiimka ah
5.5 Windows 10 Madaxweyne Siilaanyo Oo Streaming
5.6 Windows 10 Multiple Desktops
YouTube waa madal warbaahinta ugu isticmaalay iyo bulshada taas oo ka dhigaysa hubiyo in dadka isticmaala ay soo jeeda share videos kale si ay u hubiso in ay si fiican u soo baxay ee ka kooban daawaday hesho. Laga soo bilaabo madadaalo in goodhiyaha YouTube waa boosteejo ah waa koox da 'kasta oo dadka isticmaala ku content ku saabsan mawduuc kasta oo uu u maleeyo ah ka heli kartaa. Cufnaanta ee ka kooban in ka badan YouTube waa weyn iyo xaqiiqda ah in ay tahay video goobta koombiyuutarka ugu weyn dunida ayaa waa ka sii qaali ah in xirfadlayaasha IT oo hubin in goodhiyaha kala duwan oo la xiriira in ay beerta oo xiiso yihiin oo keliya ma dhigi daawado laakiin aqoonta waxaa sidoo kale helay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user inay hubiyaan in ka kooban oo uu soo uploaded in YouTube heerarka iyo ma xadgudub ku ah shuruudaha shaqada ka dhigi kara.
Qeybta 1: YouTube iyo Windows 10
Qeybta 2: Features shaaca ka qaaday by goodhiyaha ah
Waxaa jira tobanaan kun oo goodhiyaha in lagu uploaded in YouTube la xiriira Windows 10 iyo goodhiyaha, kuwaas ayaa la toogtay iyo uploaded by shaqaalaha ee warshadaha iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in kuwan goodhiyaha aan la fahamsan yahay oo keliya, laakiin waxaa sidoo kale daawaday saacadda ay baahan yihiin si ay u hubiyaan in dhibaatada la xiriirta Windows 10 loo xalin lahaa sida ugu dhakhsaha badan video ay si qoto dheer oo la xidhiidha arrinta si fiican loo daawaday. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in xiriir si aad u muhiim ah videos ee la xiriirta Windows 10 aadna ku badbaaddeen si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxaa mar kale daawaday iyo raacay haddii arrinta ku dhacaa mustaqbalka sameeyo. Qaybta xigta ee tutorial waxay ku saabsan tahay Windows 10 goodhiyaha in lagu uploaded in YouTube.
10 daaqadaha u qurux badan 10 goodhiyaha
Ka dib waa liiska ugu sareeya toban goodhiyaha ee Windows 10 in lagu uploaded in YouTube ay la socdaan Screenshot iyo links YouTube fududaato ee isticmaala.
Falanqeynta 1. Windows 10 Demo Technical
Uploaded by Walter Steven demo tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo video ugu daawan ee la xiriirta Windows 10. Falanqaynta farsamo ayaa laga sameeyey Steven hubiyaa in gobolka muuqaalada fanka ee Windows 10 ka yihiin sahamiyey iyo xiriirka ka kale dhisay functionalities ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday.
2. Intro New Windows 10 Demo
Video waxaa lagu uploaded by Taageerayaasha Windows iyo aqoonta uu leeyahay shinnida wareejiyo arrintan la xiriira waa ku weyn yahay. Tallaabada ugu hagitaan talaabo talaabo hubiyaa in user helo ugu soo baxay video iyo waxa ay sidoo kale uu noqonayaa mid si sahlan loo kaso. Xidhiidhku waa la riixi kartaa si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
3. Soo Bandhigida Windows 10- ugu fiican Windows weli
Tutorial Tani hubaal waxay daliil war uu soo kor lagu soo sheegay oo si weyn lagu talinayaa in dhammaan dadka isticmaala kuwa diidan in ay dayactir ku daaqadaha si version ugu dambeeyey sida daaqadaha 10. demo ayaa uploaded by Walter Steven oo mar kale cadeyneysaa in nin ka waa bixio casriga ah iyo ogyahay habka aad u wanaagsan
4. Windows 10 Falanqeynta 2015 Microsoft
Oo dhan muuqaalada daaqadaha 10 ayaa lagu soo bandhigay in buuxa iyo tan 8 daqiiqo tutorial waa video qaali ah oo ah dadka isticmaala laylis iyo sidoo kale kuwa kuwaas oo raadinaya in la beddelo iyo tayeynta gaar ahaan ka Windows 8 oo 8.1 pro. Fikiraan user ayaa waxaa gebi ahaanba bedelay markii this video ayaa daawaday. Video ayaa uploaded by soosaarid ADZ.
5. Demo: daaqadaha Microsoft ee 10
Video waxaa lagu uploaded by Engadget iyo waxay siinaysaa qiima buuxa in dadka isticmaala kuwa hagaajinta nidaamka ka dib ama sida daaqadaha 10. xaaladood waqtiga dhabta ah in lagu gundhig in la hubiyo in user helo gobolka ugu fiican iyo maaraynta geedi socodka tahay arrintan la xiriira.
6. Windows 10 Demo Dhisay # 9926
Video waxaa lagu uploaded si ay u hubiyaan in muuqaalada ay OS cusub ayaa shaaca ka qaaday in hab fiican iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo ugu fiican iyo gobolka processing tahay in arrintan la xiriira sidii oo dhan muuqaalada daaqadaha 10 sharxay waxaa sidoo kale marka la barbar dhigo ka OS sida Windows 7 iyo 8. video hore ayaa uploaded by qabiil computer.
7. Windows 10 Demo: Microsoft ee Joe Belfiore ee u guban muujinaysaa off qaababka cusub
Iyada oo qayb ka ah kaftan isticmaala si xaqiiqo ah sidii loo soo bandhigay qofka rasmiga ah ee shirkadda ka heli doontaa demo tan ugu waxtarka badan ee dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in demo la daawaday ilaa dhamaadka si qoto dheer aqoonta uu bartay in arrintan la xiriira sameeyo. Video ayaa uploaded by Pureinfotech
8. Windows 10 Demo la mashruuca 10049 Spartan
Mar this video ayaa uploaded by qabiil Computer kaas oo hubiya in nin waa IT shirkad xirfad ama profile aad u sarreeya in Uploads waxtar leh videos. Feature kasta oo kasta oo cusub oo uu soo baray in demo iyo user helo waayo-aragnimo la mid ah sida ay goodhiyaha ugu horumarsan ee jooga ku sifayn la mid ah. Waa waa sug oo dhan isticmaala oo isha ku heysa inay sahamiyaan OS cusub.
9. Windows 10 demo
Uploaded by Geek bax ballaaran demo ku jahaysan yahay waddooyinka sahanka ee Windows 10. Chine ayaa sidoo kale la sahmin iyo user waa aamin si aad u hesho waayo-aragnimo ugu fiican marka ay timaado demo sida waxyaalihii waxaa lagu sharaxayaa hab fudud. Furayaasha toobiye ayaa sidoo kale la sahamiyey si faahfaahsan.
10. Windows 10 dib u eegid hore iyo aragti
Falanqeynta casriga ah ayaa waxaa lagu sharaxayaa si faahfaahsan iyo in fikradda version dhamaystiran, waxaa sidoo kale aad u hesho markii demo waa la sahamiyey user wuxuu hubin. Waxaa sidoo kale in la xuso in user hubin karaa in waxa ay yihiin cayayaanka iyo arrimaha la xiriira gudahood Xiisaha in la bilaabay oo waa inuusan marna waa in la isticmaalaa sida OS hoose ka hor la sii daayo final.
Qeybta 2: Features shaaca ka qaaday in ay goodhiyaha ah
Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada in lagu muujiyey goodhiyaha in lagu kor ku soo sheegnay:
The celinta jir bilow wanaagsan menu laakiin waqti isku mid ah waa isu tag ah Windows 8 iyo 8.1 xiriiri pro sidoo.
The barnaamijyadooda iyo sida ay la xiri karaa iyadoo la isticmaalayo furayaasha toobiye ayaa waxaa lagu soo Dejiyey si faahfaahsan weyn. Chine ayaa sidoo kale lagu sahamiyey si loo hubiyo in dadka isticmaala inuusan jirin wax arrintan la xiriira heli.
Aragti ah ee shirkadda ayaa lagu sharaxay by guddoomiye ku xigeenka shirkadaha iyo sabab la mid ah user ayaa sidoo kale u yimaado si uu u ogaado waxa Microsoft ayaa dukaanka u user ee la xiriirta Windows 10.
Shaqeynta guud ee Falanqeynta casriga ah ayaa waxaa lagu sharaxayaa iyo goodhiyaha, kuwaas oo sidoo kale shaaca ka qaaday in Falanqeynta casriga ah ee ma aha in la isticmaalo sida OS ugu muhiimsan ee nidaamka.
Shaqeynta guud ee mashruuca Spartan iyo Cortana kale oo la sharaxay la siiyo fikrad user ku saabsan qaababka cusub gundhig.
Top 10 mawduucyada for Windows 10
iFlicks Alternative for Windows: Ku dar metadata, abaabulo Better Lugood
Gacan-jabis for Windows: Isticmaal gacan-jabis in Windows
Sida loo abuuro iyo Bedelka iPhone Ringtone
Baruurta Recovery Software Helo Data Back u baruurta
> Resource > Windows > 10 goodhiyaha la yaab leh u Windows 10